ဘူတန္ (သို႔) နဂါးျမိဳ႔ေတာ္သို႔ ခဏတာ (၅ ရက္)KH-8003 A
ခဏတာလို့ဆိုတဲ့ အတိုင်းပဲ ဘူတန်ရဲ့ အထင်ကရအဖြစ်ဆုံး Tiger's Nest ဘုန်းကြီးကျောင်း နဲ့ အခြား အထင်ကရ နေရာလေးတွေ ကိုအသားပေးထားတဲ့ ရက်တိုတို နဲ့ လေ့လာရမယ့် ခရီးစဉ်မျိုးလေးပါ။
Day : 1 Yangon Departure (On flight Dinner & Dinner)
ရန်ကုန်မှ ဘန်ကောက် Transit (သို့) Kolkata transit ဖြင့် ဘူတန်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာပါမည်။ ဘန်ကောင် (သို့) Kolkata မြို့ ရှိ လေဆိပ်နားမှ ဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ Kolkata transit ဖြစ်ခဲ့ လ ျှင် လေယာဉ်အချိန်ပေါ်မူတည် က မြို့ အနီအနား တဝိုက်လည်ပါတ်ပါမည်။ ညစာ အား စားသောက်ဆိုင်တွင် တည်ခင်းဧည့်ခံ ပါမည်။
Day :2Paro – Thimphu (Lunch & Dinner)
နံနက် စောစော သို့ နံနက် ၁၀နာရီ ခန့်တွင် ပါရို မြို့ ရှိလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိကာ ဧည့်လမ်းညွန်မှလာရောက်ကြို ဆိုပြီး၊ ပါရို မှ တင်ပူ မြို့သို့ ၁ နာရီခွဲ ခန့် မောင်းနှင်ကာ သွားကြပါမည်။ လမ်း တလျောက်ရှိ အထင်ကရ နေရာတချို့ နှင့် ထင်ဖူမြို့ဧည့် အထင်ကရ နေရာများနှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Buddha Point ခေါ် တောင်ပေါ်မှ ထိုင်တော်မူဘုရား သွား ရောက်ကာလေ့လာ ကြပါမည်။ နေ့လည်စာ နှင့် ညစာ အင်း တင်ပူတွင် သုံးဆောင်ပြီး တင်ပူတွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Thimphu – Paro (Breakfast Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင် ပြီး လ ျှင်၊ တင်ပူမြို့ မှ ပါရိုမြို့သို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ လမ်းတွင် တောင် ပေါ် နေရာ လေးတစ်ခုသို့ ဖြတ်သွား ရပြီး အောင်မြင်မှု အထိန်းအမှတ်ဖြင့် တည်ထားသော Dochu-la Pass သို့ သွားရောက်လေ့လာ ပြီး၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်း လောက်အောင်လှသော တောင်တန်း ကြီး များကို ခံစား ရင်း၊ ဆွစ်ဇလန် သို့ရောက်သွားသည့်အလား သင်ထင်မှတ်မှား ရပါလိမ့်မည်။ နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ကာ ပါရိုမြို့ သို့ မောင်းနှင်ကာ ပါရိုတွင် ဘူတန်ဝတ်စုံ များ ဝတ်ဆင် ရင်း အထင်ကရ နေရာများလည်ပတ်ကာ ညနေစာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပါရိုတွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :4Paro - Tiger's Nest (Breakfast, Lunch & Dinner)
နံနက်စာ စောစော နံနက်စာ အားအပြည့်အ၀ သုံးဆောင်ပြီး လ ျှင် ပါရိုနှင့်ဘူတန် ၏ နာမည်အကျော်ကြားဆုံး Tiger’s Nest ဆီသို့ ထွက်ခွာကြပါမည်။ ခပ်ဝေးဝေး မှကြည့်လ ျှင် ဘီလူး မျက်နှာပုံစံ မြင်ရသော တောင်ကြီး အား၊ လှမ်းမြင်နေရသော တောင်ခြေသို့ သွားကာ တောင်ခြေမှ လမ်းလျောက် (သို့) မြည်း များစီးကာ လမ်းတဝက်ရှိ ကော်ဖီဆိုင်လေးသို့ သွားကြပါမည်။ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွင် နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ကာ တောင်ပေါ် ဘုန်းကြီး ကျောင်းကြီး သို့ ၁နာရီကျော်ခန့် လမ်းဆက်လျှောက်ကာ တက်ကြရပါမည်။ ကျောင်းကြီး သည် တောင်စောင်း တွင် ရှိနေပြီး ရသေ့ ကြီး ၃နှစ်၃လ နှင့် ၃ ရက် တရားကျင့် ခဲ့ သည့် နေရာဖြစ်သည်။ ထူးထူးခြားခြား ရာဇဝင်များ နှင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ဘုရားခန်းပေါင်း ၈ ခန်းနှင့် ဖွဲ့ စည်းထားပါသည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားကျောင်းကြီးဖြစ်ပြီး၊ အောင်မြင်မှုကြီး တစ်ခု အောင်မြင်သကဲ့ သို့ သောခံစားမှုမျိုးပေးသည့် တောင်တက် ခရီးလေးဖြစ်ပါသည်။ ပြန် အဆင်း တွင် မြည်းများ စီးလို့ မရသောကြောင့် ၂နာရီခန့် ကြာအောင် ဆင်းကြကာ ပါရို မြို့ တွင် ညစာသုံးဆောင်ပြီး အနားယူပါမည်။
Day :5Departure from Paro
ဟုုုိတယ္တြင္နံနက္စာသံုးေဆာင္ျပီးလ ွ်င္ 11 ေလယာဥ္ျဖင္႔ ျပန္ပါမည္။
၂. ဗီဇာ ကြေး
၃. ခရီးစဉ်အားဦးဆောင်မည့် ခေါင်းဆောင်နှင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဂိုက်
၄. ကြယ်သုံးပွင့် ဟိုတယ်တွင် 4ည စာ (နှစ်ယောက်တစ်ခန်း) တည်းခိုခွင့်
၇. ခရီးစဉ်တစ်ယောက် အသုံးပြုသောကား
၈. ဂိုက်အတွက်ပေးရမည့် ဘောက်ဆူး